ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုး ခေါင်းမာစွာလုပ်ပြီး ပုန်ကန်တတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘဝမှာအောင်မြင်ကြကြောင်း လေ့လာမှုတရပ်အရ တွေ့ရှိ - CantWait2Say
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုး ခေါင်းမာစွာလုပ်ပြီး ပုန်ကန်တတ်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘဝမှာအောင်မြင်ကြကြောင်း လေ့လာမှုတရပ်အရ တွေ့ရှိ
ကလေးတွေ ဘာကြောင့် ခေါင်းမာကြသလဲပေါ့။ တခါတလေ မှာ အတော်စဉ်းစားရကျပ်စေပါတယ်။ ဘာလို့ များ ဆရာရဲ့ ဆိုဆုံးမစကား နားမထောင်သလဲပေါ့။ မိဘကို မနာခံလဲပေါ့။ မိဘ ဒါမလုပ်နဲ့ဆို ဒါမလုပ်နဲ့ စသဖြင့် ပြောစကားနားမထောင်ဘဲ ဘာလို့များ ပုန်ကန်ကြသလဲပေါ့။ တခါတလေ ရဲ့ မိဘတွေ ရဲ့. သြဇာ အမိန့်အာဏာက အစ သူတို့က စိန်ခေါ်လိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းသော လက္ခဏာ ဟုတ် မဟုတ် တချက်ကြည့်ကြရအောင်။
ResearchGate က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနရလ်ာဒ်အရ ကလေးတွေဟာ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရာ တဇွတ်ထိုး ခေါင်းမာစွာလုပ်ကိုင်တတ်ပြီး ပုန်ကန်တတ်တယ်ဆိုရင် သူတို့တွေဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ ဘဝမှာ အောင်မြင်နိုင်ချေ ပိုပြီးများကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
သြဇာအာဏာ ချုပ်ကိုင်မှုကို စိန်ခေါ်တတ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှ အရာအားလုံးကို မေးခွန်းထုတ်နေတတ်တဲ့ ကလေးတွေကို ပုန်ကန်တတ်တဲ့ကလေးတွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျဆိုပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ရန်လိုတတ်တယ် ပုန်ကန်တတ်တယ် ပြောစကားတိုင်း နာခံလေ့မရှိဘူး ခေါင်းမာတတ်တယ် မှန်တယ်ထင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်….. ဆိုတဲ့ ဒီလိုကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အရေးပါတဲ့ ဦးဆောင်သူအဖြစ် နေရာပေးခြင်းခံရတာကို တွေ့ရသလို ကျောင်းတုန်းက သူတို့ထက် စာပိုတော်ပြီး အမှတ်ကောင်းခဲ့တဲ့ ကလေးတွေထက်လည်း ဝင်ငွေပိုမိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိကြကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားကောင်းလာကြကြောင်း ၁၉၆၈ ခုနှစ်က လေ့လာခဲ့တဲ့ အသက် ၈ နှစ် နဲ့ ၁၂ နှစ်ကြား ကလေးငယ်ဦးရေ ၃၀၀၀ ကို နှစ် ၄၀ ကြာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး အချက်အလက်အသေးစိတ်အရ အဖြေထုတ်နိင်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့က သူတို့အပေါ်မှာ ဖိစီးချုပ်နှောင်လာတဲ့ စည်းတွေ မျဉ်းတွေကို လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ ဖီဆန်တတ်တဲ့သဘာဝကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု အနေနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြတာဖြစ်သလို လမ်းရိုးမလိုက်ခြင်း မလိုအပ်တဲ့ အစဉ်အလာနောက်ကို မလိုက်ခြင်း၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ရခြင်း စသဖြင့် ဒါတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်ပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကလေးတှေ ဘာကွောငျ့ ခေါငျးမာကွသလဲပေါ့။ တခါတလေ မှာ အတျောစဉျးစားရကပျြစပေါတယျ။ ဘာလို့ မြား ဆရာရဲ့ ဆိုဆုံးမစကား နားမထောငျသလဲပေါ့။ မိဘကို မနာခံလဲပေါ့။ မိဘ ဒါမလုပျနဲ့ဆို ဒါမလုပျနဲ့ စသဖွငျ့ ပွောစကားနားမထောငျဘဲ ဘာလို့မြား ပုနျကနျကွသလဲပေါ့။ တခါတလေ ရဲ့ မိဘတှေ ရဲ့. သွဇာ အမိနျ့အာဏာက အစ သူတို့က စိနျချေါလိုကွပါတယျ။ ဒါဟာ ကောငျးသော လက်ခဏာ ဟုတျ မဟုတျ တခကျြကွညျ့ကွရအောငျ။
ResearchGate က ပွုလုပျခဲ့တဲ့ သုတသေနရလျာဒျအရ ကလေးတှဟော ကိုယျမှနျတယျထငျရာ တဇှတျထိုး ခေါငျးမာစှာလုပျကိုငျတတျပွီး ပုနျကနျတတျတယျဆိုရငျ သူတို့တှဟော အရှယျရောကျတဲ့အခါ ဘဝမှာ အောငျမွငျနိုငျခြေ ပိုပွီးမြားကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။
သွဇာအာဏာ ခြုပျကိုငျမှုကို စိနျချေါတတျပွီး ပတျဝနျးကငျြမှာ ဖွဈပကျြနသေမြှ အရာအားလုံးကို မေးခှနျးထုတျနတေတျတဲ့ ကလေးတှကေို ပုနျကနျတတျတဲ့ကလေးတှအေဖွဈ သတျမှတျနိုငျကွောငျး သိပ်ပံနညျးကဆြိုပါတယျ။
ငယျငယျတုနျးက ရနျလိုတတျတယျ ပုနျကနျတတျတယျ ပွောစကားတိုငျး နာခံလမေ့ရှိဘူး ခေါငျးမာတတျတယျ မှနျတယျထငျရငျဖွဈအောငျလုပျတယျ….. ဆိုတဲ့ ဒီလိုကလေးတှဟော အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ လုပျငနျးခှငျမှာ အရေးပါတဲ့ ဦးဆောငျသူအဖွဈ နရောပေးခွငျးခံရတာကို တှရေ့သလို ကြောငျးတုနျးက သူတို့ထကျ စာပိုတျောပွီး အမှတျကောငျးခဲ့တဲ့ ကလေးတှထေကျလညျး ဝငျငှပေိုမိုရှာဖှနေိုငျစှမျးရှိကွကွောငျး၊ ကငျြ့ဝတျစညျးကမျးပိုငျးဆိုငျရာ အားကောငျးလာကွကွောငျး ၁၉၆၈ ခုနှဈက လလေ့ာခဲ့တဲ့ အသကျ ၈ နှဈ နဲ့ ၁၂ နှဈကွား ကလေးငယျဦးရေ ၃၀၀၀ ကို နှဈ ၄၀ ကွာ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့ပွီး အခကျြအလကျအသေးစိတျအရ အဖွထေုတျနိငျခဲ့ကွပါတယျ။
သူတို့က သူတို့အပျေါမှာ ဖိစီးခြုပျနှောငျလာတဲ့ စညျးတှေ မဉျြးတှကေို လကျခံခွငျးမရှိဘဲ ဖီဆနျတတျတဲ့သဘာဝကွောငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့ တကိုယျကောငျးဆနျမှု အနနေဲ့ ကိုယျဖွဈခငျြတာကို ဖွဈအောငျလုပျနိုငျစှမျးရှိကွတာဖွဈသလို လမျးရိုးမလိုကျခွငျး မလိုအပျတဲ့ အစဉျအလာနောကျကို မလိုကျခွငျး၊ ကိုယျ့လမျးကိုယျဖောကျရခွငျး စသဖွငျ့ ဒါတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ ပွနျပွီးဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့အခကျြဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
၆ လအကြာမှ Instagram မှာ ပိုစ့်အသစ်တင်လာတဲ့ Song Hye-Kyo